War aan qurxooneyn oo ka soo baxaya sheekada Vardy iyo Arsenal – Gool FM
War aan qurxooneyn oo ka soo baxaya sheekada Vardy iyo Arsenal
(England) 08 Juunyo 2016. Waxaa jiitamaya oo weli aan meel la isla dhigin sheekada weeraryahanka Leicester City Jamie Vardy iyo kooxda Arsenal.
Markii hore waxaa lagu waday inuu dhammeystiro heshiiska Gunners intuusan u dhaqaaqin France oo uu uga qeyb galayo Euro 2016 misane waxaa soo ifbaxday in laacibku uu go’aasan doono inuu ku biiro Arsenal ama inuu la sii joogo kooxdiisa tartanka Euro kaddib, laakiin warkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in laacibka uu qarka u saaran yahay inuu iska diido heshiiska Arsenal si uu ula sii joogo kooxda soo caan bixisay ee Foxes.
Warkan cusub ayaa dhabar jab wayn ku noqon doona Gunners oo iyadu miiska soo saartay lacagaha 20-ka milyan ee lagu bur-burin karo heshiiska weeraryahanka reer England.
Arsenal ayaa isku diyaarineysay inay heshiis afar sano ah uu sanadkiiba ku qaadanayo 120,000 oo bound miiska u saarto Vardy, laakiin kooxda Claudio Ranieri ayaa qudheeda sare u qaadeysa mushaarka laacibkeeda iyadoona dooneysa inuu la sii joogo.
Laacibka nafsad ahaantiisa ayaa la sheegayaa in iminka ku fikirayo inuu iska diido dalabka Arsenal si uu ula sii joogo Leicester City oo iminka qorsheynaysa inay mushaarkiisa usbuuc laha ah gaarsiiso ilaa 90,000 oo bound taa oo laacibka ka dhigi doonta kan ugu mushaarka badan xiddigaha ku ciyaara gigada Power Stadium.
Cristiano Ronaldo waa laacibka ugu dakhliga badan leh adduunka, Yaa xiga yaase ka mid ah liiska 10-ka sare??
GOOGOOSKA: Brazil vs Haiti 7-1 (Cautinho oo kabaha kula istaagey Haiti)